Mabhuku eBhaibheri Mumutauro wechiScottish Gaelic, chiIrish, nechiWelsh
Basa Redu Rokubudisa Mabhuku
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bislama Catalan Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chol Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fante Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Krio Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mam Maya Mingrelian Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tajiki Tankarana Tarascan Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Totonac Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Valencian Welsh Xhosa Zulu
Kuparidza Mashoko Akanaka Mumitauro yokuIreland Uye kuBritain
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Kuparidza Mashoko Akanaka Mumitauro yokuIreland Uye kuBritain
Zvapupu zvaJehovha zviri kuedza chaizvo kuparidzira vanhu vokuIreland nevokuBritain vachishandisa mitauro yeko. * Mitauro iyi inosanganisira Chirungu, chiIrish, chiScottish Gaelic, uye chiWelsh.
Jw.org yakanatsiridzwa yakatanga kushanda muna September 2012 uye yaiva mumitauro yakawanda kusanganisira chiIrish nechiWelsh, uye chiScottish Gaelic chakazobuda muna August 2014. Tinoprindawo mabhuku akasiyana-siyana anotsanangura Bhaibheri mumitauro iyi. Vanhu vanotaura mitauro iyi vari kuzvifarira here?
Mumwe mufundisi weimwe chechi akapiwa pepa raiva nemashoko eBhaibheri muchiScottish Gaelic, achibva atanga kuriverenga zvinonzwika, ndokutanga kuchema. Aichemei? Akanga anyatsonzi dyoo pamwoyo nezvaakanga averenga mururimi rwaamai vake, achibva ati: “Ndiani akashandura pepa iri? Ndiwo mutauro wedu uyu!”
Mumwedzi wekutanga wakabudiswa jw.org muchiScottish Gaelic, vanhu vanenge 750 vakaendapo.
Mumwe mudzidzisi wepaNational University of Ireland, kuGalway, akaudza chimwe Chapupu kuti akanga asingafariri zvechitendero. Asi paakaudzwa kuti kune bhuku rinonzi Bhaibheri—Rinombotaura Nezvei? muchiIrish, akabva ati anorida. Akati munhu wese anofanira kuverenga mabhuku eBhaibheri mururimi rwaamai vake, uye akarumbidza Zvapupu zvaJehovha nebasa ravakaita rokuita kuti vanhu vanotaura mutauro wechiIrish vawane mabhuku mumutauro wavo.
Vamwe mbuya vakafara chaizvo pavakapiwa bhuku rinotaura nezveBhaibheri muchiWelsh, vachibva vati: “Kutaura chokwadi, dai mandipa bhuku iri muChirungu, ndaisamboritora, asi ndazoritora nokuti rakanyorwa nomutauro wangu.”
Muna August 2014, takawedzera mabhuku atinobudisa pajw.org muchiWelsh. Mumwedzi wacho, nhamba yevanhu vakaendapo vachiaverenga mumutauro wechiWelsh yakabva yawedzera.
“Tiri Vomutauro Mumwe Chete”
Jesu paakapedza kutsanangurira vadzidzi vake vaviri Magwaro, vakafara vachibva vati: “Mwoyo yedu yanga isingatsvi here zvaanga achitaura nesu mumugwagwa, zvaanga achitivhurira kwazvo Magwaro?” (Ruka 24:32) Kazhinji vanhu pavanonyatsotsanangurirwa chokwadi cheBhaibheri mumutauro waamai vavo vanopedzisira vachinja upenyu hwavo.
KuWales kune mumwe murume anonzi Emyr ane mudzimai Chapupu chaJehovha, asi Emyr haana kumbobvira aenda kuchechi yemudzimai wake. Akabva atanga kushamwaridzana nechimwe Chapupu chinonzi Russell. Emyr akazochinja pfungwa. Anoti: “Chakaita kuti ndide kunyatsodzidza Bhaibheri ibhuku randakaratidzwa naRussell rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? * Paakandipa rangu akabva ati, ‘Bhuku iri nderechiWelsh. Saka ndoratichadzidza kutotanga izvozvi.’” Nei Emyr akafarira zvakaitwa naRussell zvokutaura asingatendereri? Anoti: “Tiri vomutauro mumwe chete, tsika dzedu dzimwe chete, uye tinozivana.” Mwoyo waEmyr wakanga ‘uchitsva’ paaidzidza Bhaibheri mumutauro wake wechiWelsh nokuti ainyatsonzwisisa zvaaidzidza.
Zvapupu zvaJehovha zvicharamba zvichibatsira vanhu kuti vadzidze nezvaMwari mururimi rwaamai, mutauro wavanonyatsonzwisisa.
^ ndima 2 Munyaya ino Britain iri kureva England, Scotland, neWales.
^ ndima 11 Bhuku iri rinobatsira pakudzidza Bhaibheri uye rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Mabhuku eZvapupu zvaJehovha Anonyorwa Uye Anoshandurwa Sei?
Tinobudisa mabhuku mumitauro inopfuura 750. Nei tichiita zvose izvozvo?
Kuparidza Kunzvimbo Iri Kwayo Yoga—Ireland
‘Mashoko Akanaka Kumarudzi Ose, Madzinza Nendimi’